appFigures: Ukubika konjiniyela bohlelo lokusebenza lweselula | Martech Zone
uhlelo lokusebenzaFigures yipulatifomu yokubika engabizi yabathuthukisi bohlelo lokusebenza leselula eletha ndawonye konke ukuthengiswa kwesitolo sakho sohlelo lokusebenza, idatha yesikhangiso, ukubuyekezwa komhlaba wonke, nezibuyekezo zerenki ngehora uhlelo lokusebenzaFigures iqoqa futhi ibone ngeso lengqondo izinombolo zokuthengisa nezokulanda, ukubuyekezwa kwamazinga omhlaba wonke, kanye nenye idatha isisombululo sokubika.
Xhumanisa Izitolo Eziningi - landelela uphinde uqhathanise izinhlelo zokusebenza ze-iOS, iMac, ne-Android endaweni eyodwa.
Imibiko Yansuku zonke Ye-imeyili - ngezibalo ezibalulekile, kufaka phakathi idatha yokuthengisa, ukulandwa, imali engenayo yezikhangiso, kanye namazinga amasha.
Izinga Lokusebenza - Ukulandela ngomkhondo isigaba ngasinye sohlelo lwakho lokusebenza, ukuwafaka wonke esigabeni ngasinye. Izikhundla zikhishwa kuzo zonke izitolo zohlelo lokusebenza emhlabeni wonke ngezibuyekezo zehora.
Ukubika nokubukwa - Cacisa ukuthengiswa kohlelo lwakho lokusebenza, ukulandwa, nezibuyekezo usebenzisa amathuluzi asebenzisanayo. Hlaziya ukuthengisa ngosuku, ngezwe, nangesifunda konke ekhasini elilodwa.
I-Developer API - Ngokuhlelekile finyelela yonke idatha yakho yohlelo lokusebenza nge-REST yethu API futhi wandise noma wakhe izinhlelo.
Ukungenisa idatha okuzenzakalelayo - Ngenisa idatha yakho ngqo kusuka esitolo.
Landelela Izikhangiso Eziseduze Kokuthengisa - Landelela imali engenayo nokusebenza kwe-iAd ne-AdMob eceleni kokuthengiswa kohlelo lokusebenza, kusuka ku-akhawunti eyodwa ye-appFigures. Bona okuvelayo, ukuchofoza, nokuningi ngezwe, idethi, noma uhlelo lokusebenza.
Izibuyekezo Ezihunyushiwe - funda ukuthi bathini abasebenzisi mayelana nezinhlelo zakho zokusebenza ngazo zonke izibuyekezo nezilinganiso ezihunyushelwe olimini lwakho.
Hlanganyela Kalula - Yabelana ngokuphepha nedatha yakho nanoma ngubani futhi ukhawulele ukuthi iyiphi idatha ongayenza itholakale nokuthi isikhathi esingakanani.
Tags: simo se-amazon sohlelo lokusebenzaizinhlelo zokusebenza ze-amazonukuqapha uhlelo lokusebenzausezingeni lokusebenzaukubikwa kohlelo lokusebenzasimo sesitolo sohlelo lokusebenzaukwengezaisitolo se-apulausezingeni lokusebenza lwe-droidgoogle ukudlalausezingeni lokusebenzaIzinhlelo zokusebenza
Izono Eziyisikhombisa Eziyingozi Zokumaketha Kwama-SMS